S'il Vous Plaît et uMerci | Martech Zone
S'il Vous Plaît kunye noMerci
NgoLwesihlanu, Meyi 21, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukuba khange uqaphele okwangoku, sendigqithile Paris ukusebenza nefemu. Kube luhambo lomoya ovuthuzayo kwaye sibuyela umva namhlanje (ngo-6: 30 ekuseni apha). Ukuqhubela phambili kuhambo, ngendandikuthanda ukuba nditshitshise isiFrentshi sam ukuze ndingavakali ngathi ndingumntu waseMelika ongazi nto. Ngethamsanqa, phantse wonke umntu esidibene naye apha uthetha isiNgesi kakuhle.
Sithethile nomlingane izolo, kwaye usixelele ukuba ngenene mabini kuphela amabinzana ekufuneka uwazile eParis ukuze ungangciki abahlali ngokucinga ukuba bayathetha ulwimi lwakho… Yile Nisiwe (enkosi) kunye ndiyacela (s'il vous plaît). Indenze ndacinga ngendlela esiphathana ngayo njengamashishini. Kuba intlawulo ihlala itshintsha izandla, sihlala silibale ukuthi nceda okanye enkosi.
Umntu othile undixelele kwakanye ukuba ayizonjongo zomqeshwa okanye umthengisi ukwenza 'embi umsebenzi '. Nangona kukho amashishini amaninzi anxibelelana gwenxa, ukuhambisa okungaphantsi, okanye ukungena kwimicimbi yexesha… mhlawumbi ngekhe enjongo ukuba kwenzeke njalo. Ndizakusebenza nzima kancinci ukubulela nokuzithoba ndicela iziphumo… Ndifuna ukusebenza nabantu abayiqondayo into yokuba ishishini lishishini kodwa ukukhuthaza ubudlelwane obomeleleyo nokuba nembeko kufuneka kusoloko kuthabatha indawo.
Enkosi ngenkxaso yakho kwibhlog. Okwam kubahlalutyi andixoki kwaye ndiqaphele ukuba sizicwangcisile iiveki ezidlulileyo ekukhuleni. Oku ikakhulu kukwenza ngokungqinelana kwezithuba. Ngoku uhambo lwam lugqityiwe kwaye ndilungiselela ukugqibela Ukubhengezwa kweNkampani yeDummies zingaphakathi, ndijonge phambili ekwenzeni uphando olunzulu kunye nokonyusa umgangatho wezithuba zebhlog. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ongathanda ukuba sijongane nayo, nceda usebenzise ifomu yeChaCha.me kwibar esecaleni kwiphepha lasekhaya ukuthumela umbuzo kuthi.
UkuLawula isiNxulumanisi soLungiselelo lweNkqubo
Impendulo yeHaptic: Inguquko yeeTouchscreens